खुद नाफा र प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा कुन बैंक कस्तो ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ खुद नाफा र प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा कुन बैंक कस्तो ?
खुद नाफा र प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा कुन बैंक कस्तो ?
सबै वाणिज्य बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार तीन बैंकले ६ महिनामै दुई अर्बभन्दा बढी कमाएका छन् । त्यस्तै १३ बैंकले १ अर्बभन्दा बढी र ११ बैंकले १ अर्बभन्दा कम कमाएका छन् ।
सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानीकर्ताले अध्ययन गर्ने विभिन्न आधारमध्ये नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी दुई मुख्य आधार हुन् । दीर्घकालीन लगानीकर्ताले सेयर किन्नुअघि बैंकको नाफा वृद्धिको अवस्था, प्रतिसेयर आम्दानी, बैंकका सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको प्रोफाइल, बैंकले लगानी गरेका क्षेत्र, बैंकले विगत पाँच वर्षमा वितरण गरेको लाभांशलगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सेयर विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
चालू आवको ६ महिनाको तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये नाफाका आधारमा नबिल बैंक सबैभन्दा अगाडि छ । नबिल बैंकले ६ महिनामा २ अर्ब ४ करोड खुद नाफा गरेको छ भने कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४०.४४ रुपैयाँ छ । नबिल बैंकको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने घटेको हो । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा नबिल बैंकले २ अर्ब १७ करोड नाफा गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने दोस्रो कम्पनीको सूचीमा एनआइसी एसिया उक्लिएको छ । एनआईसी एसियाले समीक्षा अवधिमा २ अर्ब १ करोड नाफा गरेको छ । गत वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा एनआइसी एसियाले १ अर्ब ५१ करोड नाफा गरेको कमाएको थियो । गत वर्षको पुससम्ममा सर्वाधिक नाफा कमाउने कम्पनीको सूचीमा पाँचौं नम्बरमा रहेको एनआइसी एसियाले यसपटक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सरकारी कम्पनी नेपाल बैंकलाई पछि पारेको हो । एनआइसी एसियाको प्रतिसेयर आम्दानी ४१.६१ रुपैयाँ छ ।
सर्वाधिक नाफा गर्ने कम्पनीको तेस्रो नम्बरमा हिमालयन बैंक र चौथो नम्बरमा ग्लोबल आइएमइ बैंक छन् । सबैभन्दा कम नाफा गर्ने कम्पनीमा सेन्चुरी बैंक र सिभिल बैंक परेका छन् । सेन्चुरी बैंकले ६ महिनामा ६५ करोड नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा केही बढी हो । गत वर्षको पुससम्ममा सेन्चुरी बैंकले ५१ करोड कमाएको थियो । त्यस्तै सूचीको पुछारमा रहेको सिभिल बैंकले ६ महिनामा ३१ करोड खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षकोे सोही अवधिको भन्दा कम हो । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ३७ करोड थियो । सेन्चुरीको प्रतिसेयर आम्दानी १५.४५ छ भने सिभिलको ७.९ रुपैयाँमात्र छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक र एनआइसी एसियाले २ अर्बभन्दा बढी नाफा गरेका छन् । त्यस्तै हिमालयन, ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सानिमा बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल एसबिआइ बैंकले १ अर्बभन्दा बढी कमाएका छन् । ६ महिनाको खुद नाफाका आधारमा बाँकी ११ बैंक अर्बपति क्लबमा उक्लिन सकेनन् ।
बैंकको कुल नाफा
२७ वाणिज्य बैंकहरुले चालू आवको ६ महिनामा ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशत धेरै हो । गत वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा बैंकहरुले ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए ।
बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर भने घटेको छ । गत वर्षको नाफा वृद्धिदर २९ प्रतिशत थियो । बैंकहरुको नाफा उच्च दरमा बढेपछि गत वर्ष बढी ब्याज लिएकाले उच्च नाफा गरेको आरोप खेप्ने गरेका थिए ।
पछिल्लाे - प्रणय दिवस : प्रेम साट्न युवायुवती रानीमहलमा
अघिल्लाे - अख्तियारकाे प्रतिवेदन : ऊर्जा क्षेत्रका ४४ अर्ब बराबरको ठेक्का समस्यामा